Iyo AI ichagadzira inosvika zviuru gumi nezvitatu muna13.000, sekureva kwekanzuru yehunyanzvi yakatorwa naApple | Ndinobva mac
Apple inotora chikamu pamwe nemakambani akati wandei mu Ruzivo Technology Indasitiri Kanzuru (ITI), uko zvidzidzo uye ongororo zvine chekuita nematekinoroji matsva uye kunyanya zvine chekuita neAI zvinoitwa. Nhasi taona mushumo unotsanangura misimboti yeAI mutemo sezvo ichienderana nemaindasitiri, hurumende nezvibvumirano pakati pemakambani eruzhinji neakazvimirira.
Gwaro iri rakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: Maindasitiri Ekumusoro Ekusimudzira Mashandisiro Ekushandisa uye Kubudirira, Mikana yeHurumende yekudyara mukati nekusimudzira iyo AI Ecosystem, uye Mikana pakati peHurumende-Yakazvimirira Kambani Zvibvumirano.
Zviratidzo zvinoratidza kuti iyi indasitiri nyowani ichagadzira pakati pe7.000 ne13.000 mamirioni emadhora pagore kutanga muna 2025. Pakati pezvikamu zvakakosha zvegwaro, tinogona kuwana:
Sezvazvinoshanduka, tinotora mutoro wedu kuve chinokonzeresa munyika yeAI zvakanyanya, kusanganisira kutsvaga mhinduro dzekugadzirisa zvingave zvakashata zvekunze uye kutora chikamu mukuumba mabasa emangwana.
Nezve izvo zvinoitwa neindasitiri yehunyanzvi:
Dhizaina dhizaini uye kuita:
Isu tinoziva basa redu rekubatanidza misimboti mukugadzirwa kwehunyanzvi hwekuchenjera matekinoroji, kupfuura kutevedzera mitemo iripo. Kunyangwe izvo zvingangove zvinobatsira kuvanhu nesosaiti zvichishamisa, vaongorori veAI, nyanzvi dzenyaya, nevatori vechikamu vanofanirwa kushandisa yakawanda nguva vachishanda kuti vaone kugadzirwa kwakanaka uye kutumirwa kwemaitiro eAI. Yakazvimiririra yakazvimiririra yeArtificial Intelligence masystem anofanirwa kugadzirwa zvinoenderana nemisangano yepasi rose inochengetedza hunhu hwevanhu, kodzero, uye rusununguko. Seindasitiri, ibasa redu kucherechedza mikana yekushandisa uye kushandisa zvisirizvo, zvinorehwa nezviito zvakadaro, uye basa nemukana wekutora matanho ekudzivirira kushandiswa zvisina kufanira nekufungidzira kweiyi tekinoroji nekuzvipira mutsika nekugadzira.
Chikamu chehukama hwehurumende chinomiririra kushanduka kwayo mukuitwa kwayo:
Flexible mutemo nzira:
Isu tinokurudzira hurumende kuti dziongorore maturusi emitemo aripo uye dzichenjerere vasati vatora mitemo mitsva, mirau, kana mutero izvo zvingangoita nekusaziva kana zvisina basa kukanganisa budiriro nekushandiswa kweAI. Sezvo mashandisiro eAI matekinoroji achisiyana zvakanyanya, -kupenda goridhe kunogona kusaziva kudzikamisa huwandu hwetekinoroji dzakagadzirwa uye dzakapihwa kumusika, kunyanya nemakambani matsva uye madiki. Tinokurudzira vagadziri vemitemo kuti vaone kukosha kweSWAps pazvinenge zvichidikanwa; Maitiro ekutonga haashande kune ese AI maitiro. Isu takagadzirira kushanda nevamiriri vemitemo nevatongi kugadzirisa zvinetswa zviri pamutemo pazvinoitika.
Chekupedzisira, maererano nezvibvumirano pakati pemakambani eruzhinji-akazvimirira:
Makambani anozoita mashandisiro eAI mari inokwezva kune ese ehurumende nemaindasitiri akazvimirira, uye kusimudzira hunyanzvi, husimbe uye kuenderera. Nokusimbisa mabhizinesi, kunyanya pakati pevashandi veindasitiri, masangano ezvidzidzo, uye hurumende, tinogona kugadzirisa AI R&D uye kugadzirira vashandi vedu kumabasa emangwana.
Gwaro iri rinogona kuisa hwaro hweramangwana AI nzira yemakore anouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » AI ichagadzira inosvika zviuru gumi nezvitatu muna13.000, sekureva kwekanzuru yehunyanzvi yakatorwa naApple